अमेरिका आएपछि नेपालका ठूलाबडा भनाउँदाहरू पनि काम गर्छन – Durbin Nepal News
अमेरिका आएपछि नेपालका ठूलाबडा भनाउँदाहरू पनि काम गर्छन
भदौ १७, २०७७ १०:५१ मा प्रकाशित
यसपटक कुनै राज्यको बारेमा नलेखी अमेरिकाबाट नेपालीहरूले सिक्नु पर्ने दुईवटा विषयहरूको बारेमा चर्चा गर्न गई रहेको छु ।
यद्यपि अमेरिकामा नेपालीहरूको त्यति लामो बसाई छैन तर पनि निकै छोटो समयमा नेपालीहरूले तरक्की गरेका छन किनभने हामीले अमेरिकाबाट सिक्नुपर्ने धेरै पाठहरू मध्ये दुईवटा निम्नलिखित विषयहरू सिकि सकेका छौँ ।
1. वैयक्तिक स्वतन्त्रता ( Individual freedom )
2. Dignity of labor (श्रमप्रतिको मर्यादा)
अमेरिका आउनेबित्तिकै एउटा व्यक्तिले व्यक्तिगत स्वतंत्रता त पाउँछ तर ज़िन्दगीको पापड़ बेलाई पनि शुरू हुन्छ । मामाको घर र आमाले माया गरेर दिएको खाने कुराहरू पनि याद आउँछ । बुवाले कति दुख: गरेर लालन- पालन गर्नु भएको रहेछ पनि महसुस हुन्छ । यसरी अमेरिकाले आँफै कमाएर खान सिकाउँछ । अमेरिकामा नेपालको जस्तो घरमा काम गर्ने मानिसहरू हुँदैनन । सबै कामहरू स्वयंले गर्नु पर्छ ।
विद्यार्थीहरूका लागि पनि कठिन छ ।पढाईशुल्क अत्यन्त महँगो छ । पहिलो सेमिस्टरको खर्च अभिभावकले पठाएता पनि त्यपछिका सेमिस्टरहरूको खर्च पठाउन सजिलो छैन । फलत: विद्यार्थीहरूले कम्तीमा ८ घण्टा काम नगरी धर छैन । काम पनि गरेर पढ़ाई पनि समयमै पूरा गर्नु असंभव नभए पनि दुरूह हुन्छ । अत: कतिपय विद्यार्थीहरूले पढ़ाई छाडेर Out of Status ( Illegal ) हुन्छन । त्यसपछि अनेक लफड़ाहरू शुरू हुन थाल्छन ।
जेसुकै भएता पनि एउटा व्यक्तिले वैयक्तिक स्वतंत्रताको उपभोग गर्दै, लडदै- पडदै ज़िन्दगीका धेरै पाठहरू सिक्छ । व्यक्तिगत स्वतंत्रताले शुरू-शुरूमा राम्रो परिणाम नदेखाए पनि अन्ततोगत्वा सफलता हासिल गराउँछ तर लत्तो छाडनु हुँदैन ।
2. Dignity of labor
( श्रमप्रतिको मर्यादा )
अमेरिकामा आएका हरेक व्यक्तिले श्रमको महत्व बुझेको हुन्छ किनभने यहाँ कामको मूल्यांकन हुन्छ । काम गरेर खानेको इज़्ज़त हुन्छ । काम सानो- ठूलो भन्ने हुँदैन । सर्टिफिकेटअथवा मार्कसीट देखाएर जागीर पाईन्न परन्तु आफ्नो सीप, दक्षता अथवा इमान्दारिता देखाएर काम पाईन्छ । भनसुन अथवा मनसुन चल्दैन । नेपालमा कितापमा श्रमप्रतिको मर्यादाका बारेमा धेरै कुरा लेखिएको हुन्छ तर व्यवहारमा ठीक विपरीत हुन्छ । अत: नेपालबाट आउँदा केवल त्यहाँको मार्कसीट अथवा सर्टिफिकेट मात्रै लिएर आउँदा हुन्न बरू सानो- तिनो सीप लिएर आए राम्रो हुन्छ । त्यहाँको पढ़ाई यहाँ काम लाग्दैन ।
महिलाहरूले नर्सिंग वा ब्यूटी पार्लरको सीप लिएर आउँदा राम्रो हुन्छ । अथवा कुकिंग, बेबी- सीटिंग वा न्यानी केयरको भए पनि हुन्छ ।
काम गर्न लजाउनु हुन्न । कामको सवालमा कसैले कसैको कुरा काटदैन । त्यहाँका
( नेपालका ) ठूलाबडा भनाउँदा हरूले पनि यहाँ जस्तोसुकै काम गरिरहेका हुन्छन । डलर प्रिय हुन्छ; चल्नै पर्यो ।
पुरूषहरूले कुकिंग अथवा ड्राईभिंग सिकेर आए उत्तम हुन्छ । मैले यहाँ high- skilled professional हरूको बारेमा कुरा गरि रहेको छैन तर सर्वसाधारण अथवा low- skilled man power को बारेमा कुरा गरि रहेको छु । अंग्रेजीमा Communication Skills जति धेरै छ त्यति राम्रो तर कम्तीमा Americans ले बोलेको बुझ्न सक्ने र आँफूले पनि मनका कुरा बुझाउन सके पुग्छ । American English सजिलो हुन्छ British English भन्दा तर शुरू- शुरूमा कठिन हुन्छ ।